Fampitan-kafatra Ho An’ny Daholobe Mahavariana, Mahatehotia Nataon’ny Minisiteran’ny Hamehana Belarosiana · Global Voices teny Malagasy
Fampitan-kafatra Ho An'ny Daholobe Mahavariana, Mahatehotia Nataon'ny Minisiteran'ny Hamehana Belarosiana
Voadika ny 20 Marsa 2017 5:12 GMT
Sary: Minisiteran'ny Hamehana Belarosiana
Namoaka fampisehoana sarimiaina iray ny Minisitera Belarosiana miandraikitra ny fitantanana ny loza sy ny hamehana nasionaly. Manasongadina biby amin'ny endrika Looney-Toons tratran'ny voina isan-karazany ny andian-tantara antsoina hoe “Boky Majika,” ary mampianatra ny ankizy ho lavitry ny loza.
Misy mpandray anjara fototra telo miramirana ao: bitro tia karokaroka iray, bitrovoalavo feno hafetsena, ary vorona taitaitra kely iray, samy mitondra solosaina misy toromarika fiarovana avy izy ireo. Miatrika an'i Volchidze ilay Amboadia izay te hihinana azy ireo mafy ry zareo, kanefa dia ilay Amboadia ihany no sendra ny olana ao anatin'izany.
Hatramin'ny volana Febroary, nizara tantara an-tsary fohy telo tao amin'ny fantsona YouTube ny Minisitera. Ao amin'ny fizarana voalohany, misarika ireo biby ho ao anaty farihy faran'izay mangatsiaka hivadika ranomandry ilay amboadia, izay manantena ny hihinana azy ireo raha rendrika ao . Mieritreritra ny handeha hikorisa eo ambony ranomandry ireo biby, kanefa nampitandrina ny solosainy fa mety hampidi-doza izany ka nahatonga ny paikan'ny amboadia ho tsy nahomby .
Ao amin'ny fizarana faharoa, miara-mitendry mozika ireo biby mahafinaritra. Nanipazan'ilay amboadia boatin'afokasoka maka endrik'olombelona ry zareo, izay niparitaka avy eo, raha nangataka ny hanatevin-daharana ilay tarika . Niezaka ny hanimba ny fandrebirebena hatrany ilay solosaina tamin'ny fampitandremana fa tena mampidi-doza ny milalao afokasoka.
Tamin'ity indray mitoraka ity, na izany aza, tsy niraharaha ilay milina ireo biby, ary nanasa ireo afokasoka handray anjara tao amin'ny tarika . Araka ny efa nampoizina, nivadika ho lelafo ny fotoana nampientanentana azy ireo tatỳ aoriana , niely manodidina ny afo. Mazava ho azy, nanavotra ireo biby tamin'ny alàlan'ny filazana ny fomba hiavota-tena ilay solosaina fiarovana ary dia voavonjy ry zareo
Ao amin'ny fizarana fahatelo, lasa bilaogera malaza ilay bitrovoalavo . Naniry ny mba ho malaza ihany koa ilay amboadia raha nialona ny fahombiazany, ka niezaka nanao fandaharana fahandroan-tsakafo tao amin'ny habaka. Amin'ny maha fahavalo azy, tsy nahalala ny fomba fitandremana ilay amboadia, ary vetivety dia tsy nahazaka ny herinaratra ka niteraka fitselarana ary nanomboka ny fahamaizana. Vao maika niha-ratsy kokoa ny zava-niseho, rehefa niezahana novonoina tamin'ny alàlan'ny siny feno rano ny afo, izay nahatonga azy ho main'ny herinaratra ka potipotika lasa lavenona sisa ilay amboadia ..
Mandritra izany fotoana izany nanaraka ny toro-hevitra mikasika ny fiarovana elekitirika rehetra ilay bitrovoalavo ary nahandro mofomamy maro .
Tsy vao voalohany izao ny governemanta Belarosiana no nanao ezaka fanandramana lahatsary fialam-boly amin'ity endrika sarimiaina ity. Tamin'ny Septambra 2015, namoaka fanambaràna ho an'ny daholobe manasongadina zazalahy iray izay mizara lesona amin'ny fomba “fakana selfies mahafinaritra amin'ny fomba azo antoka ” ny Minisiteran'ny Hamehana.
” Tsy manao fahasahisahiam-poana toy ny olona tsy mandinika aho rehefa te hanao fahagagana ho an'ny namako,” hoy ilay zazalahy tao amin'ny filazana ho an'ny daholobe nanazava. “Afaka manao selfies amin'ny fomba azo antoka tanteraka aho. Mampiasa ny atidohako aho rehefa misy olona mikasa hifanamby amiko ,” hoy izy, sady nanazava fa tena tsara ahavitana zavatra mahatalanjona ny Photoshop .
Namoaka lahatsary fohy momba ny asan'ny mpamono afo (mpamonjy voina) andavanandro ny minisitera tamin'ny 19 Janoary “Ny Andron'ny Mpamonjy Voina ” ao Belarosia .
Nisy vokany tamin'ireo vahoaka tamin'ny ankapobeny ity ezaka famoronana ity. Tao amin'ny YouTube, nahazo mpijery maherin'ny 2,5 tapitrisa ny Minisiteran'ny Hamehana, ary ny vaovao momba ireo sarimiaina ireo no tena horonantsary malaza indrindra tao anatin'ny volana vitsivitsy .